AZONAO lazaina ve izay alain’ny olona eo amin’ny tany? Sahala amin’ny fanala izany, fotsy ary manify sy mivongambongana. Tsy fanala anefa izy io, fa zavatra fihinana.
Vao iray volana izay no nandaozan’ny Israelita an’i Ejipta. Any an’efitra izy ireny. Kely ny sakafo naniry tany, ka dia nitaraina ny olona hoe: ‘Aleonay novonoin’i Jehovah tany Ejipta. Fara faharatsiny dia nanana ny sakafo rehetra nirinay izahay tany.’
Hoy i Mosesy: ‘Itony no mofo izay nomen’i Jehovah ho fihinanareo.’ Nantsoin’ny olona hoe MANA izany. Sahala amin’ny mofomamy natao tamin’ny tantely ny tsirony.
Nisy andro iray tamin’ny herinandro anefa izay nilazan’i Jehovah tamin’ny olona mba hanangona mana avo roa heny. Ny andro fahenina izany. Ary nasain’i Jehovah nitehirizana hatramin’ny andro manaraka izany, satria tsy hampilatsaka amin’izany izy amin’ny andro fahafito. Rehefa nitahiry mana hatramin’ny andro fahafito izy ireo, dia tsy niteraka olitra izany ary tsy maimbo! Fahagagana hafa iray koa izany!
Nandritra ny taona rehetra naha tany an’efitra ny Israelita, dia nofahanan’i Jehovah tamin’ny mana izy ireo.
Hizara Hizara Karazan-tsakafo Vaovao Iray
my tant. 34